Top Forex currencies kune Trade in 2019 - The Best Currency Pairs in Forex Trading
Top Forex currencies kune Trade in 2019 - The Best Currency Pairs
Zvinyorwa Zvitsvene zve EUR / USD kutengesa
Iyo mbiri mbiri dzezvematongerwo enyika munyika yose hazvishamisi kuti European Union uye United States of America. Dhora, iro rinonziwo Greenback, ndiyo inotengeswa mari yakawanda kupfuura yepasi rese uye yakawanda kwazvo, zvichiita EUR / USD iyo inonyanya kuzivikanwa uye inoshandiswa mari mari maviri.
Pamusana pekuenderera mberi kwaro kwehupfumi, vaviri vacho vanopa kupararira kwakanyanya sechisarudzo chokutanga chevatengesi chero chipi zvacho vachitsvaga purogiramu kubva mukutsvaga mune mari yemari. Zvinonyatsozivikanwa zvekutengesa zvisungo uye nzira dzakasiyana-siyana dzekutengesa dzinogona kushandiswa kune izvi zviviri, nekuda kwefuma yakawanda yemari yezvepfumi neyemari inobatsira kutungamirirwa kwemutengo wayo wemusika. Nokudaro, mikana yakawanda yekuzarura mari yakawanda inowanzobva kune inogara ichichinja-chinja chekutsamwa kwechipiri ichi chinoratidzwa.
Icho chinotungamirirwa ne EUR / USD mutengo wemari wekutengesa chinotarisirwa nekuenzanisira simba kwezvinhu zviviri izvi zvinotungamirira pfuma. Zvichitsanangurwa zviri nyore, kana zvimwe zvose zvingoramba zvichiripo uye hupfumi hweAmerica huri kunyora kukurumidza kukurumidza, huchaita kuti Dollar isimbise pakurwisana neEuro. Kusiyana ndezvechokwadi kana Eurozone ichiona kuwedzera kwehupfumi hwayo, izvo zvichatungamirira Euro kusvika kune imwe nyika yakasimba, pakuenzanisa neDollar iyo inenge ichineta.
Chimwe chezvinhu zvakakosha mukushandura kwesimba rakakwana ndeyero yezvibereko zvekufarira. Apo huwandu hwemari yeAmerica mari yakasimba kudarika iyo yehupfumi hwekuEurope, inobhadhara mari ye US inopesana ne Euro. Kana zvikwereti zvinodarika paEuro zvakasimba, iyo Dollar inowanzodonha. Sezvo ataura izvi, zvikwereti zvinotarisirwa chete hazvirevi kutama kwematengo emusika emari.
Dynamics ye EUR / USD inonyanya kutungamirirwa nekusagadzikana kwezvematongerwo enyika kweEurozone, sezvo ichizivikanwa kwazvo kuti Eurozone inoshandiswa purovhinzi yemari nemari. Kusiyana kwekuchinja kusingatarisirwi nekusiyana pakati penyika dzinosanganisira nhoroondo yeEU nokuda kweDorlar yakasimba inopikisa Euro.
Aya ndiwo EUR / USD anotengesa zvinhu zvaunoda kuzive usati waita mari inonyanya kuzivikanwa mari mumusika.
Zvimwe Zvinyorwa zve GBP / USD kushambadzira
I-GBP iyo inonziwo Cable, British Pound kana kunyange pound sterling, inotengesa kutengeserana pahuwandu hwakawanda mukati mezuva. I-GBP / USD inozivikanwa seyiyo yakashata uye yakashata yakawanda mari sezvo zvisiri zvisingaone kuona mazamu ehema uye zvisingafanozivikanwi kufamba. Kuva nekuchinja kusingatariswi mumutengo waro ndiko kukwezva kukuru kune zviitiko zvevatengesi pamwe chete nehuwandu hwakawanda hwekutsvaga kwevatangi vekutanga.
Kushandiswa kweUkodzero Yokuongorora uye kwemashoko makuru anobva kuUnited Kingdom uye neU.S. zvikonzero zvinowanzoita zvekutengesa vaviri vacho nenzira inonzwisisika iyo inokubatsira kuti uwedzere mikana yako yekubatsira. Pane mazano mazano akanaka aunofanira kuongorora kana ukasarudza kutengesa GBP / USD. Kuvaka nzira yakanaka yekutengeserana inobva pakugara uchizvinyatsoenderana nehupfumi hwehupfumi kunyanya kuziva nekucherechedza zvisingatarisirwi zvemashoko ekubudiswa kwemashoko zvinogona kukonzera maitiro asina kukanganisa mumutengo uyu wemusika.
Maitiro Akakosha eD USD / JPY kutengesa
Yen iyo ndiyo mari yakawanda kwazvo mumari yose yeAsia yezvekudyara ndiyowo maitiro ekutsvaga kwehuwandu hwehupfumi hweAsia. Apo kusagadzikana kunoonekwa muAsia sector, vatengesi vanowanzopindura nekutengesa kana kutenga yen senzvimbo yekutsvaga kune dzimwe nyika dzeAsia nyika dzisiri nyore kutengesa. Zvakakoshawo kutaura kuti hupfumi hweJapan hwakanyoresa nguva dzekunyoresa kwehupfumi hwehupfumi uye huwandu huri pasi huripo. Kana uchitengesa USD / JPY, chiratidzo chinotungamira chekutsvaga kwemaitirwo ayo ndechekuti hupfumi hweJapan hwatinofanira kuteerera.
Vakawanda vanofananidza denderedzwa vanoona kuti Yen inobatsira mune zvekutengeserana. Pamusana peJapan zvakaderera mutengo wekutambira iyo yakachengetedza vazhinji veZ1990 kusvika ku2000s, vatengesi vakwereta mari yeJapan pamari shoma ndokubva vashandisa iyo kuisa mari mune dzimwe mari dzakanakisisa dzokubvumira. Izvi zvinoita kuti zvibatsire kubva pamitengo yakasiyana.
Nokudaro mumamiriro ezvinhu epasi rose, kubhadhara kweYen nguva dzose kwakaratidza kuonga kuva basa rakaoma. Kunyange zvakadaro, Yen inoshandisa zvinhu zvakafanana zvakakosha semamwe mari ipi zvayo.
Chimwe chezvinyorwa zvakanyanyozivikanwa zvakanyanya muJapan currency value ndeye US Dollar. Iyi tsika isingatarisirwi ndiyo chikonzero nei vatengesi vekare vasati vashandisa kuongorora kwekwenyanzvi kuti vanzwisise kushandiswa kwemaviri aya, panguva yakareba. Nguva dzose mabhizimusi anokwanisa kusiyana kubva ku30 kana 40 pips kusvika kumusoro kana 150 pips.